Ejipta · Febroary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Ejipta · Febroary, 2011
Tantara mikasika ny Ejipta tamin'ny Febroary, 2011
Fahalalahàna miteny 27 Febroary 2011
Alzeria 24 Febroary 2011
Alzeria 22 Febroary 2011
Efa am-bolana raha ny fijery azy no mafotaka ny adihevitra momba ny anjara toeran'ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra tamin'ireo fihetsiketsehana. Tsy ela akory izay, nifantoka tamin'i Tonizia sy Ejipta izany adihevitra izany, izay ny tranonkala toy ny Facebook sy Twitter no tena nitana toerana lehibe tamin'ny fandrindràna ny hetsika. Ity ny singany iray amin'izany adihevitra izany, avy tao amin'ny Twitter.
Ejipta: Olana teo amin'ny fanehoan-kevitra, soa ihany fa teo ny Google sy ny Twitter
Fanoherana 19 Febroary 2011
Androany hariva, niara-niasa ny Google sy Twitter teo amin'ny famoronana fitaovana iray ahafahan'ny Ejiptiana mandefa tweet...amin'ny alalan'ny fametrahana hafatra. Vokatry ny tsy fahafahana mampiasa aterineto, dia manampy ny Ejiptiana io fitaovana io amin'ny fiantsoana numerao any ivelany amin'ny alalan'ny finday sy ahafahan'izy ireo mametraka hafatra ho an'izao tontolo izao.
Fahalalahàna miteny 17 Febroary 2011
Fahalalahàna miteny 16 Febroary 2011
Inona no zavatra hiseho any Ejipta amin''ny 25 Janoary? Mangataka hetsika sy fitorevahana etsy sy eroa ny vahoaka. Iza no handray anjara, ary aiza? Inona no angatahan'izy ireo? Mety hoe misy olona sasany manohitra ny zavatra rehetra? Mila mitsidika kely ny tontolon'ny bilaogy Ejiptiana fotsiny isika dia mahita valiny amin'ny fanontaniantsika rehetra.
Fanoherana 16 Febroary 2011
Iràna 16 Febroary 2011
Fifindràmonina 16 Febroary 2011
Hatramin'izay nivoahan'ny vaovao hoe tapa-kevitra ny hiala tsy ho filohan'i Ejipta i Hosni Mubarak, dia nandeha ny fety nanerana ny firenena. Nanerana an'izao tontolo izao, nankalaza tanaty firaisankina amin'ny vahoaka Ejiptiana ny vahoaka ary koa ny fahitany ny fahalalahany vaovao indray. Horonantsary maro hatrany no aseho eo amin'ny tambajotra sosialy ary amin'ireo tranonkala fizaràna horonantsary. Horonantsary mihamaro hatrany no alefa amin'ny tambanjotra sosialy sy horonantsary zaraina amin'ny tranonkala. Vahoaka antapitrisany no naka sary tamin'ny zoro samihafa ny fotoam-pankalazana amin'ny ankapobeny. Ireto misy ampahana horonantsary naseho tamin'ny aterineto.
Fanampim-baovao:Naheno tsaho maro mifanohitra izahay momba ity tantara ity any an-toerana ary miandry porofo bebe kokoa manamarina fa navotsotra i Ghonim. Navotsotra androany i Wael Ghonim, mafana fo Ejiptiana amin'ny aterineto sady mpiasan'ny Google, noho ireo Ejiptiana mbola manohy mangataka ny fifaranan'ny fitondràn'i Mubarak. Notendren'ireo mpitolona ao amin'ny Kianja Tahrir ho mpitondra tenin-dry zareo i Ghonim, mba hanerena ny governemanta hamotsotra azy.